Ireo mpitoraka blaogy ao amin’ny Rising Voices mandray anjara amin’ny Blog Action Day 2010 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2010 20:16 GMT
Ny Blog Action Day dia hetsika miseho isan-taona izay hiarahan'ireo mpitoraka bilaogy eran-tany manoratra mikasika ny olana iray ao anatin'ny andro iray. Ny tanjona dia ny hananganana ny fitandremana sy ny hanaovana adi-hevitra eran-tany mikasika ny olana goavana iray izay miantraika amintsika rehetra. Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia ny ‘rano’.
Juliana Rincon an'ny Hiperbarrio, Kolombia dia nanoratra [es] mikasika ny fandanian-drano be loatra amin'ny fanasàna akanjo sy ny fandroana noho ireo fanazaran-tena isan'andro any amin'ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena :
Ariniaina ao amin'ny Foko Madagascar dia nanoratra mikasika ny fomba vaovao hanadiovana ny rano:
Nizara fomba tsotra hanadiovana ny rano ny iray amin'ireo namako nandritra ny fihaonan'ny Fikambanana Anglisintsika. Mino aho fa mety ho hevitra tsara ny fizaràna izany eto androany. Antsoina hoe SODIS io fomba io (Solar water disinfection na Fanadiovana ny Rano amin'ny alalan'ny Tara-masoandro).
Avylavitra ao amin'ny Foko Madagascar dia niresaka mikasika ny fiarovana ireo loharano sy ny lanjan'ny fizarana rano fisotro madio:
Cristina Quisbert ao amin'ny Voces Volivianas, any Bolivia dia manoratra:
Angon-tsonian'ny Change.org|Hàka Widget|Hanangona sonia vaovao »